Qaabka xulista 4.5, Hawiye Ayaa Ku Qasaaray
Somalia qabiilka ugu tirada badan, ugu dhulka weyn, ugu dhaqaalaha badan, waa Hawiye. Haddii BEESHA SHANAAD ay uga Xildhibaano yaraadeen qabiilooyinka kale waayo wey ka dadyar yihiin, hawiye waxay aheyd iney ka Xildhibaano bataan qabiilooyinka kale madaama ay ugu dadbadan yihiin. Hawiye waxaa ku jira qabiilo calculus sida Habargidir, Abgaal, Xawaadle, Gaaljecel, Murusade oo kiiba u ka dadan yahay ama u dhigmo qabiilada ugu dadka badan sida Isaq oo ugu dadbadan Dir ama Majerteen, oo ka mida qabiilooyinka ugu calculus Darod.
Waxaa kaloo dawladda kasoo baxaysa ay u dhimeysaa Hawiye, ciidamada la sheegaayo ee shisheeye, waxaa la keenaayaa dhulkooda Muqdisho. Haddii ay dad kufsanayaan, waxay kufsan doonaan gabdho hawiye, haddi ay dad dili doonaan, waxay dili doonan dad hawiye, haddii ay dhacdo in dalka laga saaro waxaa ku nafwaayi doona dad Hawiye, sidii dhacday 1993 dii oo kumanaan hawiye ahi ku nafwaayeen”Black Hawk Down”.
Waxay ila tahay siyaasiyinta hawiye wey ka jiifteen shaqadoodii. Madaama Soomali qabiil iney wax ku qeybsatto ku heshiisey, Siyaasiyiinta Hawiye waxay tahay shaqadoodu iney cadkooda si fooljigan ugu codeeyaan. Sida ka muuqata qaabka xulista ee ku saleysan 4.5, waxay u egtahay in shaqsiyaadka matala Hawiye aysan u matalin qabiilkooda sidii la rabay.
Waxay runtu tahay, sidii dawladihii hore, in Hawiye ka shalaayi doono tirada ugu jirta dawladda.
Anigoo aan cidna ku xumeyneyn, aan runta isu sheegno, qabiil marka wax lagu qeybsanaayo, hawiye Markii ay dulqaataan, Mudulood iyo Madarkicis Duduble ku jiro kaliya ayaa 80 xubnood xaq u leh. Iska daa inta kale oo calculus sida Xawaadle, Murusade, Baadicadde, Gaaljecel iyo lafaha kaloo dhan.
Cagliga ma ogola in Mudulood oo qabiil aad u culus ah ay helaan 15 Xubnood halka Isaaq oo meesha Joogin la siiyey 28 Xubnood.
Macquul maaha marka Cayr oo power house ah la siiyo 3 xubnood, ciise oo aan meesha daganeyna la siiyo sideed.
Ma gadmeyso in Xawaadle oo culus uu qaato 8, halka Dhubahante ka helay tiro la mid ah.
Ma cuntameyso in Sacad oo ah jilib culus lasiiyo 3 xubin, halka jareer weyne la siiyey 7
Waxaa iigu sii daran Majeerteen oo runtii culus ayaa 12 xubnood helay halka Marexaan laga siiyey 14 Xubnood.
Waxay ila tahay waxbaa ka qaldan sida wax loo soo xulay. Waxayse ila tahay Hawiye ayaa Jabka ugu weyn soo gaari doona. Magaaladooda ayaa ciidan la keeni doonaa, halka meelaha kale ay nabad noqon doonaan. Suuqyada dhaqaalaha ee xamar ayaa ciidamadaasi carqalateyn doonaan, halkaasna waxaa ku lumi doona dhaqaalihii Hawiye, halka Hargeysa ay sii xoogeysan doonto.
Hawiyoow, jiifka ka toos. Ka soo horjeeso ciidamo dalka la keeno. Wadankana u tali. Hadii aad intaa garanweydo, waa burburkaagii. Waxaan qabaa hawiye oo is habeeya ayey Somaliya ku badbaadi kartaa marka siyaasadda qabiilka laga eego. Nin lagu sexdoow ha seexan. Diid Ciidamo shisheeye. Nabadda Xamar adugu sug. Haddii kale, Waajabtay kana soo waaqsanmeysid ee ogow.
1) Madaxda dhaqamada, culumada, saraakiisha, ganacsatada beelaha Hawiye, min Koofurta Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo, waa iney arinta shir dagdag ah ka qaataan. Ha dheyelsan.
2) Waa in ay soo saran Go’aan ay ku mucaaradayaan ciidamo shisheeye oo dalka la keeno. Badbaadada qabiilka ayaa ku xiran.
3) Qilaafaadka beelaha Hawiye waa in lagu dhameeya. Si deg deg ah.
4) Waa in gole Oday dhaqameed OO hawiye la sameeya, haddii uu jirana la xoojiyaa.
5) Waa in Hawiye qaadaa xilka ah iney Xamar Nabad ka dhigayaan. Arintan waa iney Horkacaan saraakiisha waaweyn ee hawiye sida Galaal iyo raga la mid ka ah.
6) Dawladda imaaneysa waa iney raacaan laakin labada sano ee ugu horeysa waa in barlamaanka qabiilka ku dhisan loo badalaa mid deegaan ku dhisan.
Masuulka iyo waxgaradka Hawiyoow, ama joog Kenya ama Joog Xamar, kakac jiifka.
ali waraabe <waraabe2@hotmail.com>